Fantaro i Nabil Berri, mpikatroka ny fiteny Acehnese · Global Voices teny Malagasy
Hitantana ny kaonty @AsiaLangsOnline ny 08-14 Jolay 2020 i Nabil.
Voadika ny 11 Jolay 2020 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Português, Ελληνικά, Italiano, русский, عربي, English
Sary natlotr'i Nabil Berri.
Taorian'ny fahombiazan'ny fanentanana media sosialy nankalazana ny fimaroam-piteny an-tserasera manerana an'i Azia tamin'ny herintaona dia mbola mitohy amin'ity taona 2020 ity ny tetikasa fiaraha-miasa. Hifandimby ireo mpikatroka ny teny sy mpanandrateny hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline isa-kerinandro hizara ny zava-niainany, ny fahaiza-manaony ary ny zavatra nianarany avy tamin'ny asa famelomana aina indray ny fampiroboroboana ny fampiasana ny fitenin-drazany ampian'ny fifantohana manokana amin'ny anjara asan'ny aterineto. Niarahan'ny Rising Voices, ny Digital Empowerment Foundation, ary ny O Foundation niasa ny fanentanana.
Isa-kerinandro dia hamaly fanontaniana maromaro momba azy ny mpampiantrano tsirairay ary hanome fomba fijery fohy momba ny fiteniny. Miaraka amin'i Nabil Berri (@nabilberri) ny fanontaniana sy valiny etoana izay manolotra ny zavatra horesahany mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy.
Nabil Berri (NB): Miarahaba, Nabil ny anarako. Mipetraka any Banda Aceh, faritany Aceh Indonezia aho. Nianatra ho dokotera tao amin'ny Oniversite Syiah Kuala tany Banda Aceh, renivohitra faritany aho. Tena liana tamin'ny fiteny Acehnese aho na dia tsy mifandraika tamin'ny fiteny aza ny fianarana nataoko. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2008 ny fikatrohako fiteny rehefa nanomboka ny Wikipedia Acehnese niaraka tamin'i Teungku Hasmahdi, Fadli Idris ary Andri Humardhani aho. Tamin'izany fotoana izany, nampiahiahy ahy ny momba ny fiteny Acehnese izay nametra ny literatiora an-tsoratra tamin'ny endrika poezia. Ara-tantara, tononkalo ny ankamaroan'ny literatiora Acehnese.
Amin'izao fotoana izao, miasa amin'ny tetikasa hafa toy ny famelomana indray ny endritsoratra Acehnese Jawi, ny rakibolana an-tserasera sy ezaka fanondroan-toerana notarihan'ny Mozilla izaho sy ny mpankafy fiteny Acehnese hafa. Izaho ihany koa no mitantana ny tranonkala fianarana fiteny Acehnese antsoina hoe Bahasa Aceh.
Ankoatra ireo asa ireo, nandray anjara tamin'ny Wikitongues aho tamin'ny fandraketana ireo fitenim-paritra fampiasa andavanandro any Indonezia.
NB: Na dia manana sata manokana mizaka tena aza ny faritany Aceh ao Indonezia, dia indrisy fa tsy manana sata ofisialy ny fiteny Acehnese. Toy ny fitenim-paritra hafa any Indonezia dia ny mpianatra any amin'ny ambaratonga fototra sy ny ambaratonga faharoa ihany no mianatra Acehnese.
Eo ihany koa ny fiatoan'ny fanotam-pirinty amin'ny fiteny Acehnese. Ohatra, tsy misy gazety na gazetiboky navoaka tamin'ny teny Acehnese. Saingy soa ihany, noho ny aterineto, manana fampitam-baovao an-tserasera izahay amin'ny fiteny Acehnese. Ny fankatoavana ny Acehnese Wikipedia avy amin'ny Wikimedia Foundation tamin'ny taona 2009 no zava-bita miavaka voalohany.
Ao amin'ny sehatra fampielezampeo sy sary, iray ihany ny onjam-peo (Meugah FM) mampiasa ny Acehnese. Manana zorom-baovao amin'ny fiteny Acehnese ihany koa ny radiom-panjakana Indoneziana (RRI). Raha ny fahitalavitra eto an-toerana, manana fandaharam-baovao sy fandaharana fifampiresahana maraina (Kupi Beungoh) natao amin'ny fiteny Acehnese ny Aceh TV ka mampiroborobo ny fampiasana ilay fiteny noho izany.
NB: Manana tantara lava hatramin'ny nanoratana azy voalohany tamin'ny taonjato faha-17 ny fiteny Acehnese. Isan'ireo zavatra maro hozaraiko miaraka amin'ny Rising Voices ny tantarany, ny literatiora, ny fampandrosoana ary ny satany ankehitriny na an-tserasera na ivelan'ny aterineto.
NB: Ny fanatsarana ny satan'ny fiteny Acehnese avy amin'ny fiteny am-bava mankany amin'ny fiteny soratana no tena antony manosika ahy. Vitsy kely ny literatiora Acehnese amin'ny poezia hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 ary mbola zara raha misy ny boky poezia amin'ny fiteny hatramin'izao.
Hampitombo ny lazany eo amin'ireo mpampiasa ny fiteny ary handrisika ny vahoaka Acehnese hirehareha amin'ny fitenin-drazany ny fisian'ny Acehnese ao amin'ny tontolo nomerika.
Ny hanomezana ny Acehnese ny sata ofisialy ao amin'ny faritany Aceh ny nofinofiko amin'ny hoavy. Hiasa betsaka amin'ny sehatra rehetra ny Acehnese raha azo izany sata izany. Ohatra, tsy maintsy amin'ny teny Acehnese miaraka amin'ny Indoneziana no hanoratana ny antontan-taratasy ofisialy rehetra. Ampiasaina ho toy ny fomba fampianarana ho an'ny ambaratongam-pampianarana rehetra manomboka any amin'ny fampianarana zaza madinika ka hatrany amin'ny oniversite ny fiteny Acehnese. Hampiroborobo ny fampiasana ny Acehnese any an-tsekoly amin'ny bokin'izy ireo momba ny karazam-pahalalana rehetra, anisan'izany ny siansa izany.